Kooxda Barcelona oo qorsheynaysa inay la soo saxiixato xiddiga Manchester City ee Raheem Sterling – Gool FM
(Barcelona) 09 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dhisan dalka Spain ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay u dhaqaaqdo soo xero-gelinta Weeraryahanka Manchester City ee Raheem Sterling suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga sida wararku ay sheegayaan.
26-sano jirkaan oo haatan tababar la qaadanaya xulka Tababare Gareth Southgate ee England ka hor ciyaaraha Euro 2020 ayaa dhowaan u soo muuqday mid bartilmaameed u ah kooxda reer Spain oo u aragta inuu yahay bedelka ugu habboon ee xiddigooda Ousmane Dembele.
Sida laga soo xigtay SPORT, Kooxda Barcelona ayaa kalsooni ku qabta inay dhaqaale ka heli karto iibinta ciyaartoyda dhowrka bilood ee soo socda, waxaana ay rajeynayaan inay dhawaan bilaabaan wadahadallada Sterling.
Si kastaba ha noqotee, wararku waxaa kale oo ay sheegayaan in kooxda Catalan laga yaabo inay miiska u saarto ciyaaryahanka iyo lacag kaash ah haddii ay awoodi waayaan inay weeraryahanka ku maalgeliyaan lacag kaash ah oo kaliya.
Sterling labo sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa Man City, kuwaasoo doonaya inay xagaagan iska diraan ciyaartoy si ay taasi uga caawiso maalgalinta heshiisyo kale oo ay kula soo wareegi karaan xiddigaha kale, iyagoo indhaha ku haysa xiddigaha reer England ee Jack Grealish iyo Harry Kane.
Tan iyo markii uu kaga soo biiray Liverpool bishii July ee sanadkii 2015-kii, Sterling waxa uu dhaliyay 114 gool 292 kulan oo uu u saftay Man City, wuxuu kula guuleystay saddex Premier League, shan League Cup iyo hal FA Cup.
Dowladda Ruushka oo xiriirka UEFA u gudbisay dacwad ka dhan ah maaliyadda xulka Ukraine uu ku ciyaarayo tartanka Euro 2020... (Maxay tahay fariinta siyaasadeed ee ay maaliyaddu muujineyso?)